Lokhu kuzoba ukwakheka kwe-LG G6 | Izindaba zamagajethi
Lokhu kungaba ukwakheka kwe-LG G6 entsha
Unyaka wezi-2016 usuya ngasemaphethelweni futhi bonke abakhiqizi bamadivayisi eselula sebevele babheke onyakeni ka-2017 njengonyaka abazokwethula ngawo izimakethe zabo emakethe abazama ukubuyela kuzo babe ngabaphathi. Enye yezinkampani ezifuna ukufaka ishalofu kulo nyaka ngokushesha okukhulu yi-LG, ehlulekile ukuphumelela ngayo LG G5, yize wayenakho konke noma cishe konke ukukwenza.
Inkampani yaseNingizimu Korea isivele isebenza kanzima kwi-LG G6, umklamo wayo oputshukile emahoreni asanda kwedlula, nokuthi ingafinyelela emakethe maduzane, ukuzama ukulindela konke ukwethulwa kwenkampani, ikakhulukazi iSamsung Samsung S8.
Umklamo we-LG flagship omusha uzofana kakhulu nowe-LG G5, noma kungaziwa ukuthi uzoqhubeka yini ube yi-modular noma uma uzoba ukuphela ngaphandle kokushintshana ngamamojula lapho ibhethri lingenakukwazi nokuba khona isusiwe. Ukubona imiphumela yokuthengisa empofu i-LG G5 eye yaba nayo, kufanele kucatshangwe ukuthi inkampani yaseNingizimu Korea ilahla umbono wamamojula.
Ngokusobala kufayela le- isithombe esihlungiwe nezinhlelo ze-LG G6, siyabona ukuthi kuzoqala kancane ukwedlula owandulelayo mhlawumbe futhi kube nokuthile okuncanyana. Lapha sikukhombisa isithombe esihlungiwe;
Ngokuphathelene nezici nokucaciswa, okwamanje sazi imininingwane encane kakhulu, yize sekuvele kunamahemuhemu okuthi singaba ne-terminal enesikrini esingu-5.5-intshi nesisombululo se-QHD, iprosesa le-Snapdragon 821 noma i-830 kanye ne-6GB ye-RAM. Ikhamera izoba mbili ngesitayela saleyo efakwe kwi-LG V20.
Ucabanga ukuthi i-LG izosimangaza nge-LG G6 yayo elandelayo?.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Lokhu kungaba ukwakheka kwe-LG G6 entsha
I-China izokhombisa okukude kakhulu kweNyanga ngo-2018
Isicelo se-YouTube se-PS4 manje sikuvumela ukuthi ubuke amavidiyo angama-360 nge-PlayStation VR